ဒီတစ်ပါတ် “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်မှာတော့ အခုလို COVID … – PVTV Myanmar
ဒီတစ်ပါတ် “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်မှာတော့ အခုလို COVID 19 တတိယလှိုင်းကြောင့် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ရတတ်မအေးဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မှာ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီကို ဆက်လက်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရင်း အဲဒီ့ တတိယလှိုင်းကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ကို ဒေါင်းက မေးမြန်းဆွေးနွေးထားတာကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်” အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး PVTV ရဲ့ Channel များဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/pvtvmyanmar, www.youtube.com/pvtvmyanmar နဲ့ Mizzima, DVB ရုပ်သံလိုင်းတို့မှာလဲ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Like – 21K Share – 4160
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ထောက်ခံကာကွယ် ပြဌာန်းချက်တွေ ပါဝင်တဲ့ NDAA မှာ ကန်သမ္မဘိုင်ဒန် လက်မှတ်ထိုး
Daw Naing says:
2021-07-10 at 10:20 PM
အားလုံးပဲ ဘေးဘယာဝေးကွာလို့ ကိုယ် စိတ် နှစ်ပါးအေးချမ်းကြပါစေ
2021-07-10 at 10:38 PM
2021-07-10 at 10:54 PM
ေဒါတ်တာ ဉီးခင်မောင်လွင် ကိုဗစ်ရောနဲ့ပတ်သတ် ပြီး ပြည်သူတွေဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ရမလည်း သိရင်ပြောပါ ကျန်တာတွေဘာမှ မပြောပါနဲ့
May Nhin says:
2021-07-10 at 11:09 PM
ဆရာကြီးနဲ့ ဒေါင်းတို့ ဘေးဘယာကင်းကွာ ကျန်းမာကြပါစေ*
Tda Moe December says:
2021-07-10 at 11:13 PM
မအလ ကြီး အာဏာခုံ ကဆင်းတာနဲ့ CDM ခြင်းထဲကနေ
ချက်ချင်းအမြန်ပြန်လာပြီး covid တိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်ပါ့မယ် ခုလဲရောက်ရာနေရာကနေ
CDM pregnant mother များကို အကူအညီပေးနေပါတယ်
2021-07-10 at 11:35 PM
ဆရာကြီးရဲ့ အဖြေတွေကြားရတာ အားတက်ပါတယ်ရှင့် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
Ma Ma Yu says:
စစ်အာဏရူးရယ် ပြည်သူတွေကို မရက်စက်ပါနဲ့တော့
Cho Mee says:
2021-07-11 at 8:25 AM
ရောဂါကုသနိူင်ဖို့ဆိုရင် တစ်ယောင်ကိုသိန်းနှစ်ဆယ် ရှိမှ ကုလို့ရတော့မှာ
2021-07-11 at 9:20 AM
သူခိုးဓါးပြလူသတ်​ကောင်​ပြန်​ပေး,ငပုအုပ်စု စီစဥ်​ပေး​သော ကာကွယ်​ဆေးမှန်သမျှ ပြည်သူတဦးအ​နေဖြင့် လုံးဝ လုံးဝ မထိုးပါ၊ အသက်အ​သေခံပါမည် သူခိုးငပုကို ​​​ကျေးဇူး အတင်မခံနိုင်ပါ။
Shwe Phoo says:
2021-07-11 at 9:24 AM
ကျေးဇူးပါ ဆရာကြီး နဲ့ ဒေါင်း
Ueindar Sara says:
2021-07-11 at 9:50 AM
ဘုန်းကြီးလဲ CDM ။
Thandar Lin says:
2021-07-11 at 10:26 AM
Mavis Mya Mya Win says:
2021-07-11 at 10:32 AM
Listening 2times/3times.this, carefully .
Khin Sandar Oo says:
2021-07-11 at 10:33 AM
နှစ်‌ယောက်လုံး ချောတယ် 🌹
Sai Aung Hlaing says:
2021-07-11 at 11:07 AM
ထေါင်တွေထဲမှာ မတရား ဖမ်စီးထိန်သိမ်းထားတဲ့ အထဲကလူ သားတွေကို စိတ်ပူ တယ် ကိုယ်ချင်းစာမိတယ် ဘာအဆက်သွယ်မလဲမရ ဘာမလည်းအပြင်ပနဲ့ လက်လန်း မမီတော့ အများအတွက်စိတ်ပူတယ်
2021-07-11 at 12:03 PM
အရမ်းကို ဆရာနဲ့ တကွ အားလုံးကိုလေးစားပ့ါတယ်ဗျ
Caesar Lay says:
2021-07-11 at 12:15 PM
မသာ​တွေဦးစီးတဲ့​ဆေးရုံမသွားချင် အိမ်မှာပဲ​နေမ​ကောင်း စိတ်မ​ကောင်း😪😪😪
Thandar Lei says:
ပြည်သူတွေ အမြန် ကပ်ဘေးမှ ကင်းဝေးပါစေ😭😭😭
မြပန်းသား မြန်မာ says:
2021-07-11 at 1:02 PM
ဒေါင်း…. ရေ…တမင်သက်သက်လုပ်တယ်လို့ ယူဆရတယ်ဟု မပြောလိုက်ပါနဲ့ အဲဂလို မဖြစ် ဖြစ်အောင် စီမံချက်ဆွဲပီး ပက်ပက်စက်စက် လုပ်နေတာပါလို့ ဒဲ့….ပြောကြပါစို့။
ငွေ စံအိမ် says:
2021-07-11 at 1:21 PM
NUG က ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ့်အစီအစဉ်ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ် ဆရာကြီးရှင့် စကစကို လုံးမယုံကြည်သလို အဆုံးထိ CDM သွားမှာပါ ကျမတို့နိုင်ငံကို အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရအမြန်ဆုံးအုပ်ချုပ်နိုင်ပါစေ
Mratt Curly says:
2021-07-12 at 9:30 PM
CDM ပထမဆုံး စလုပ်တာ
ဘာကြောင့် ပထမဆုံး CDM
စလုပ်ခဲ့ လဲ… ရှင်းပြမယ်
ငွေ ရမှ ဆေးကုပေးကြတယ်
ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံမှာ ဝင်လုပ်မယ်
ဒါမှ မဟုတ် အစိုးရဆေးရုံမှာ
နာဂ ဒေသမှာ ဆေးကုဖို့
ဆရာဝန်တွေ ဘာကြောင့် CDM စလုပ်လဲ
ကိုဗစ် ပထမ လှိုင်း စဖြစ်ချိန်
လူတိုင်း တစ်နိူင်ငံလုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး က ထိတ်လန့်တယ်
သူနဲ့ contact တွေမှာ ဆက်ကူးတယ်
နောက်ဆုံး ဆရာဝန်တွေပါ သေတယ်
အဲ…. ဒုတိယလှိုင်း လာပြီ
ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယလှိုင်း ပြီးသွားတယ်
ခု နောက်ဆုံး …..
ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းကလဲ လာဖို့ တာဆူနေချိန်
ပထမဆုံး CDM စလုပ်တာ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေပဲ
သူတို့မှာ က ရည်ရွယ်ချက် ရှိပြီးသားပါ
ကျန်တဲ့သူတွေက CDM ထလုပ်
ဘဝတွေ ပျက်နေကြတာ မြင်မကောင်းဘူး
2021-07-14 at 2:59 AM
I’m 🇩🇪 no use von Russia 🇷🇺 Antibiotics 😷🥺😰😰😰
Dr Khin Mg Lwin and Daung (July 10/2021)